AMBOARY NY LESOKA TSY FITANDREMANA MOMBA NY SERIVISY AO AMIN'NY WINDOWS 10 - MALEMY
Amboary ny lesoka tsy fitandremana momba ny serivisy ao amin'ny Windows 10
SYSEM_SERVICE_EXCEPTION dia efijery manga an'ny fahafatesana (BSOD) izay misy kaody hadisoana 0x0000003B. Ity lesoka ity dia manondro fa tsy mandeha amin'ny laoniny ny fizotran'ny rafitrao. Raha atao teny hafa, midika izany fa tsy mifanaraka ny fametrahana ny Windows sy ny mpamilinao.
Ny hadisoana momba ny serivisy ho an'ny serivisy ao amin'ny Windows 10 dia mitranga rehefa manatanteraka ny fizahana mahazatra azy ny rafitra ary mahita dingana iray izay mivadika amin'ny kaody tsy voafaritra ho kaody manana tombony. Ary koa, io lesoka io dia mitranga rehefa miampita ny mpamily karatra sary ary mampita fampahalalana diso amin'ny kaody kernel.
Ny antony mahazatra indrindra an'ny SYSEM_SERVICE_EXCEPTION ny lesoka dia mpamily maloto, lany andro na tsy mandeha amin'ny laoniny. Indraindray koa ity lesoka ity dia vokatry ny fahatsiarovana ratsy na ny tsy fetezan'ny Registry. Andao hojerentsika ny momba an'io hadisoana io sy ny fomba fanamboarana ny Eritreritra momba ny serivisy amin'ny serivisy System 10 mora manaraka ity torolàlana ity.
Windows 10 mpanampy vaovao farany niraikitra tamin'ny 99%
Ny antony mahatonga ny lesoka efijery manga SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
[VAHAOLANA] Fahadisoana maningana amin'ny serivisy amin'ny Windows 10
Fanamboarana isan-karazany izay afaka mamaha ity olana ity
Fomba 1: Mihazakazaha fanamboarana fanombohana
Fomba 2: Mihazakazaha CHKDSK sy System File Checker
Fomba 3: apetaho ireo mpamily farany
Fomba 5: Mihazakazaha CCleaner sy Antimalware
Fomba 6: esory ny laharana fanavaozana ny Windows KB2778344
Fomba 7: Mihazakazaha Diagnostika Memory Windows
Fomba 8: Ampandehano ny Windows BSOD Troubleshoot Tool
Fomba 9: Mihazakazaha mpamily
Fomba 10: esory ireo programa manokana
Ny antony mahatonga ny lesoka amin'ny efijery SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Mpamily fitaovana simba na lany andro
Virosy na Malware eo amin'ny rafitrao
Rakitra rafitra miasa na simba na simba
Fanamarihana: Raha tsy afaka boot ianao amin'ny Windows anao, dia avelao Safidy Boot Advanced Boot avy eto ary andramo ireo dingana rehetra eto ambany.
1. Hamarino tsara fa fanavaozana ny fanavaozana ny Windows.
2. Manaova scan amin'ny rafitra feno amin'ny alalàn'ny antivirus manana fahazoan-dàlana.
3. Vaovao farany ireo mpamily anao (Ataovy azo antoka fa vaovao ny mpamily karatra sary).
4. Alao antoka fa antivirus iray ihany no mandeha raha nividy iray hafa ianao, ataovy izay hamonoana ny Windows Defender.
5. Esory ny fanovana tato ho ato amin'ny alàlan'ny System Restore.
1. Rehefa manomboka indray ny rafitra dia tsindrio ny Fiovan'ny + F8 lakile hanokafana ny safidy Legacy Advanced Boot, ary raha tsy manampy ny fanalahidy, dia mila mamela ny Safidy boot efa mandroso amin'ny fanarahana an'ity lahatsoratra ity .
2. Manaraka, amin'ny Safidio safidio safidy, safidio Mamaha olana .
3. Avy amin'ny efijery Troubleshoot, safidio Safidy mandroso .
4. Ankehitriny, avy amin'ny safidy Advanced, safidio Fanombohana / Fanamboarana mandeha ho azy .
5. Ity dia hizaha olana amin'ny rafitrao sy amboary ho azy ireo.
6. Raha tsy mahomby ny fanombohana / fanamboarana mandeha ho azy dia andramo manamboatra fanamboarana mandeha ho azy .
7. Atsaharo ny PC-nao, ary ity dia tokony afaka manamboatra ny hadisoana momba ny serivisy amin'ny serivisy amin'ny Windows 10 mora foana; raha tsy izany dia tohizo amin'ny fomba manaraka.
ny sfc / scannow Command (System File Checker) dia manadihady ny fahamendrehan'ny rakitra Windows rehetra voaaro ary manolo ny kinova diso, novaina / novaina na simba tamin'ny dikan-teny marina raha azo atao.
1. Sokafy ny Command Prompt miaraka amin'ny zon'ny administratif .
2. Ankehitriny, amin'ny fikandrana cmd dia soraty ity baiko manaraka ity ary tsindrio Enter:
3. Andraso mandra-pahatapitry ny mpanamarin-drakitra rakitra, dia soraty ity baiko manaraka ity:
Efatra. Hamarino raha afaka manamboatra ny lesoka tsy fitandremana momba ny serivisy ao amin'ny Windows 10 ianao.
1. Tsindrio ny Windows Key + R, dia soraty devmgmt.msc ary tsindrio hiditra hanokatra Device Manager.
2. Ankehitriny havaozy ny mpamily miaraka amin'ny marika fiantsoana mavo, ao anatin'izany Mpamily karatra horonantsary , Mpamily Karatra Feo sns.
3. Araho ny torolàlana eo amin'ny efijery hamita ireo fanavaozana ny mpamily.
4. Raha tsy mandeha io voalaza etsy ambony io dia esory ny mpamily ary avereno ny PC-nao.
5. Aorian'ny famerenan'ny rafitra dia hametraka ireo mpamily ho azy izy.
6. Manaraka, sintomy ary apetraka Intel Driver Update Utility .
7. Mihazakazaha Utility Update Driver ary tsindrio Next.
8. Ekeo ny fifanarahana fahazoan-dàlana ary tsindrio Install.
9. Rehefa vita ny fanavaozana ny System, kitiho ny Launch.
10. Manaraka, safidio Atombohy ny scan ary rehefa vita ny scann'ny mpamily dia tsindrio Ampidino.
11. Farany, kitiho ny Install raha hametraka ireo mpamily Intel farany ho an'ny rafitrao.
12. Rehefa vita ny fametrahana ny mpamily dia avereno indray ny PC-nao.
Raha tsy mety aminao ilay fomba etsy ambony, dia mety hanampy ny mihazakazaka CCleaner:
1. Sintomy ary apetraho CCleaner .
varavarankely fanombohana menio fanombohana
2. Tsindrio indroa ny setup.exe hanombohana ny fametrahana.
3. Tsindrio ny Bokotra fametrahana hanombohana ny fametrahana ny CCleaner. Araho ny torolàlana eo amin'ny efijery hamita ny fametrahana.
4. Mandrosoa ny rindranasa ary avy amin'ny menio ankavia, safidio Custom.
5. Ankehitriny, jereo raha mila manamarina zavatra hafa ankoatry ny fikirana misy anao ianao. Vantany vao vita dia tsindrio Mamakafaka.
6. Rehefa vita ny fandalinana dia tsindrio ilay Mihazakazaha CCleaner bokotra
7. Avelao i CCleaner hihazakazaka ny làlany, ary izany dia hamafana ny cache sy ny cookies rehetra amin'ny rafitrao.
8. Ankehitriny, mba hanadio bebe kokoa ny rafitrao dia safidio ny Tabitra fisoratana anarana, ary alao antoka fa voamarina ireto manaraka ireto.
9. Vita izay dia tsindrio ny Sakano ny olana bokotra ary avelao ny CCleaner hijerena.
10. CCleaner dia hampiseho ireo olana misy ankehitriny Windows Registry ; tsindrio fotsiny Amboary ireo olana voafantina bokotra
11. Rehefa manontany i CCleaner, Ianao ve mila fanovana nomaniny ho solon'izay ny rezistra? mifidy Ie.
12. Raha vantany vao vita ny backup, safidio Amboary ny olana rehetra voafantina.
13. Avereno ny PC-nao raha te hitahiry fanovana. Toa io fomba io Amboary ny lesoka tsy fitandremana momba ny serivisy ao amin'ny Windows 10 rehefa voakitika ny rafitra noho ny malware na virus.
1. Soso-kevitra ny mandehana amin'ny maody azo antoka hamafana Windows Security Update KB2778344 .
2. Manaraka, Mandehana any Panel fanaraha-maso> programa> Fandaharana sy endri-javatra .
3. Ankehitriny tsindrio Jereo ireo fanavaozana napetraka ao amin'ny faritra havia havia.
4. Ao amin'ny bara fitadiavana eo ankavanana ambony, karazana KB2778344 .
5. Ankehitriny tsindrio havanana amin'ny Security Update ho an'ny Microsoft Windows (KB2778344) ary safidio esory hamafana fanavaozana ity.
ny windows dia tsy havaozina amin'ny 1809
6. Raha angatahana fanamafisana dia tsindrio eny.
7. Atsaharo indray ny PC-nao, izay tokony ho afaka Amboary ny lesoka tsy fitandremana momba ny serivisy ao amin'ny Windows 10.
1. Soraty ny tsianjery ao amin'ny bara fitadiavana Windows ary safidio Diagnostika Memory Windows.
2. Ao amin'ny andiana safidy aseho dia safidio Atsaharo indray izao ary zahao ny olana.
3. Aorian'izay Windows dia hamerina hanamarina ny mety lesoka RAM ary antenaina asehoy ny antony mety ahazoanao ny hafatra diso an'ny Blue Screen of Death (BSOD).
4. Avereno indray ny PC-nao ary zahao raha voavaha ny olana na tsia.
5. Raha mbola tsy voavaha ny olana dia mihazakazaha Memtest86, izay hita amin'ity lahatsoratra ity Amboary ny tsy fahombiazan'ny fanaraha-maso kernel.
Raha mampiasa fanavaozana Windows 10 Creators ianao na avy eo, dia azonao atao ny mampiasa Troubleshooter inbuilt Windows hanamboarana ny Blue Screen of Death Error (BSOD).
1. Tsindrio ny bokotra Windows + I hanokafana ny Settings, avy eo tsindrio ny ‘ Fanavaozana sy fiarovana . '
2. Avy amin'ny pane ankavia, safidio ' Mamaha olana . '
3. Mikorisa mankany amin'ny ‘ Mitadiava sy manamboatra olana hafa ’Fizarana.
4. Tsindrio ny ‘ Blue Screen 'Ary tsindrio ny' Alefaso ilay troubleshooter . '
5. Atsaharo indray ny PC-nao, izay tokony ho afaka Amboary ny lesoka tsy fitandremana momba ny serivisy ao amin'ny Windows 10.
Ilaina ihany ity fomba ity raha afaka miditra ao amin'ny Windows ianao, fa tsy amin'ny fomba azo antoka. Avy eo, alao antoka fa hamorona teboka System Restore.
Mihazakazaka Fanamarinana mpamily manamboatra lesoka tsy fitandremana momba ny serivisy System, mandehana eto.
Voalohany, andramo alàvana / esory ireto programa manaraka ireto tsirairay ary zahao raha voavaha ny olana:
McAfee (Vonoy fotsiny, aza esorina)
Webcam (Atsaharo ny webcam-nao)
Fanavaozana mivantana ny MSI
Rindrambaiko VPN misy
Fitaovana USB AS Media
Driver nomerika tandrefana na mpamily kapila kapila ivelany hafa.
Rindrambaiko karatra sary Nvidia na AMD.
Raha efa nanandrana ny zava-drehetra etsy ambony ianao dia mbola tsy afaka manamboatra ilay Fahadisoana manoloana ny serivisy System, dia andramo ity lahatsoratra ity , izay mamaha ny olan'ny tsirairay momba io lesoka io.
Dia izay; efa nahomby nianatra ny fomba Amboary ny lesoka tsy fitandremana momba ny serivisy ao amin'ny Windows 10, fa raha mbola manana fanontaniana momba an'ity lahatsoratra ity ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra.
fivarotana windows 8.1 tsy hisokatra
endritsoratra miafina tsara indrindra amin'ny teny
tsy afaka mifandray ny mpanonta
Windows 10 fanavaozana ary ny filaminana dia mihidy avy hatrany